InsideView လောင်စာဆီရှာဖွေရေးထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူ Go-to-Market အောင်မြင်မှု | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 2, 2017 အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 1, 2017 ဂျိုး Andrews
CMOs အပေါ်ဖိအားသည်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသဖြင့်၎င်းတို့အားတိုက်ရိုက်ပေးသည် ဝင်ငွေတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ဘတ်ဂျက်နှင့်စနစ်များပိုမိုပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရန်။ “ ကောင်းပြီ” လို့သင်ပြောတယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့စျေးကွက်များအတွက်အချို့လေးစားမှု။ သို့သော်ယခုစိန်ခေါ်မှုမှာတိုင်းတာ။ ရသောရလဒ်များရရှိရန်နှင့်၎င်းတို့သည် ပို၍ တာ ၀ န်ယူမှုခံနေရပြီဖြစ်သည်။
အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအတားအဆီးတစ်ခုမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များသည်အဖွဲ့အစည်း၏ ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုအပေါ်သူတို့၏သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အဓိကစွမ်းရည်များမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်ကွာဟမှုကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်များသည်အရေးကြီးဆုံးကြီးထွားမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘယ်ကပ်လျက်ဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့သင့်သလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးစံပြ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကိုက်ညီသောဖောက်သည်များကိုဝယ်ယူရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှထိရောက်သနည်း။
ထို့အပြင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော C-suite သည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စျေးကွက်သို့သွားသောစျေးကွက်မဟာဗျူဟာကိုမည်သို့ဆန့်ကျင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အမြန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်လွဲချော်သောအခွင့်အလမ်းများကထိပ်တန်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်လိမ့်မည်။
InsideView ထောက်လှမ်းရေး Solutions ပစ်မှတ်ထား
InsideView သည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏စျေးကွက်သို့သွားသောမဟာဗျူဟာများကိုအသံအတိုးအကျယ်ပေါ် အခြေခံ၍ ပို၍ ပစ်မှတ်ထားသောချဉ်းကပ်မှုသို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ကူညီသည်။ င်း ထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းပစ်မှတ်ထား အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုအကောင်းဆုံးရည်မှန်းချက်များကိုလျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်ကူညီခြင်း၊ ပိုမိုသက်ဆိုင်မှုရှိခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ပိုမိုများပြားခြင်းနှင့်အကောင့်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းများကိုကူညီသည်။
အခြေခံ firmographics အရသတ်မှတ်ထားသောစာရင်းအပေါ်မှီခိုရန် B2B ကုမ္ပဏီများအတွက်မလုံလောက်ပါ။ Targeting Intelligence သည်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သင်၏ဆက်နွယ်မှုကိုပြသည့်ပြည့်စုံသောဆက်သွယ်မှုဇယားတစ်ခုကစက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောအကောင့်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းနှင့်လူမှုရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုပေးခြင်းဖြင့်မည်သူ၊ အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များ။ InsideView ၏ပစ်မှတ်ထားထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းသည်သန်းနှင့်ချီသောတစ် ဦး ချင်းအချက်ပြမှုနှင့်အချက်အလက်အချက်အလက်များကိုတိကျသေချာစေရန်နှင့်ပြည့်စုံမှုရှိစေရန်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုစီကိုတြိဂံပြုရန်စက်သင်ကြားမှုနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးပြုသည်။
InsideView ၏ SaaS-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများသည် Targeting Intelligence ၏စွမ်းအားကိုအရောင်းနှင့်စျေးကွက်လုပ်ငန်းအသွင်သို့တိုက်ရိုက်တင်ပြီး Marketing Automation နှင့် CRM system များသို့လွယ်ကူစွာပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
InsideView ပစ်မှတ် - မှန်ကန်သောသတင်းစကားကိုမှန်ကန်သောဖောက်သည်များနှင့်ထိတွေ့ရန်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောအလားအလာစာရင်းပြုစုပါ။
အတွင်းပိုင်း - ဖြည့်စွက်အချက်အလက်များသည်သင်၏အချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှုမြင်နိုင်ရန်နောက်ထပ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။
InsideView အရောင်း - ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်ရန်အတွက်မှန်ကန်သောအကောင့်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ နားလည်ပါ၊ ဆက်သွယ်ပါ။
InsideView ကို Refresh လုပ်ပါ - အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတွင်ပိုမိုအောင်မြင်စေရန်သင်၏ CRM အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါ။
InsideView API များ - InsideView Targeting Intelligence ကိုမင်းရဲ့အသုံးချပရိုဂရမ်များထဲသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏နည်းလမ်းကိုသုံးပါ။
သင့်ကိုလမ်းပြရန် InsideView Expert Services
InsideView သည် B2B ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီး ၄ င်းတို့၏အချက်အလက်များကိုမောင်းနှင်သည့်စျေးကွက်သို့သွားသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအကူအညီတောင်းသည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည်သူတို့၏အချက်အလက်များ၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုလျှော့မတွက်ပါ။ InsideView Expert Services သည်သန့်ရှင်းခြင်း၊ အီးမေးလ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုတိုးချဲ့ခြင်းစသည့်အချက်အလက်အရည်အသွေးစီမံကိန်းများကိုကူညီခြင်းမှသည်ဖောက်သည်များ၏စုစုပေါင်းလိပ်စာပြုနိုင်သောစျေးကွက် (TAM) ကိုသတ်မှတ်ရာတွင်ကူညီပေးသော Target Market Analytics ကဲ့သို့သောပိုမိုသောအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများအထိဖြစ်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သုံးစွဲသူများအားအချိန်နှင့်တပြေးညီ“ what-if” အခြေအနေများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်အချက်အလက် visualization console ကိုပေးသည်။ အကောင့် -based စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အကောင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ နယ်မြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအဘယ်နည်း။ ထိပ်တန်း B2B စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်တိုင်းတာသောဝင်ငွေတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အဆင့်သုံးဆင့်ကိုလိုက်နာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရသည်။
သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုသေချာစွာသိပါ - နှင့်သူတို့ကိုရောက်ရှိဖို့ဒေတာရှိသည်. သင်၏အရောင်းအဖွဲ့သည်သင်၏အကောင့်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည် (ဤသည်မှာမကြာခဏကုမ္ပဏီများကစတင်သည်)၊ သို့သော်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်ဆုံးတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြင့်မောင်းနှင်သင့်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကဏ္seများအကြားပစ်မှတ်ထားသည့်စျေးကွက်ရွေးချယ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည်။ သင်၏စံနမူနာပြဖောက်သည်ပရိုဖိုင်း (ICP) ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်စျေးကွက်သို့သွားသောစျေးကွက်မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ICP ဆိုသည်မှာသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးအလားအလာရှိမရှိကိုသင်တိုင်းတာရန်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်စံသတ်မှတ်ချက်များတွင်ကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များ (ဥပမာ - စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အရွယ်အစား၊ ပထ ၀ ီအနေအထား)၊ ပစ်မှတ်ခေါင်းစဉ်များနှင့်အခန်းကဏ္ the များနှင့်ကုမ္ပဏီသည်ဆန်းသစ်သည်ဖြစ်စေ၊
သင်၏ ICP ကိုသင်သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏စုစုပေါင်းလိပ်စာရသောစျေးကွက် (TAM) ကိုသတ်မှတ်ရန်နှင့်သင်၏ပစ်မှတ်စျေးကွက်၏အရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ထို attribute များကိုသုံးနိုင်သည်။ TAM သည်သင်၏ ICP နှင့်မည်မျှသောကုမ္ပဏီများနှင့်သင့်ရှေ့မှောက်၌စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများမည်မျှရှိသည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ InsideView သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများစုသည်သူတို့၏ TAM ၏ ၁၀% အောက်ကို၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒေတာဘေ့စ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောကွက်လပ်ကို whitespace ဟုခေါ်သည်။ သင်၏ whitespace ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်သင်၏ဒေတာဘေ့စ်ရှိရှိပြီးသားပစ်မှတ်များသို့အချက်အလက်အသစ်များကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းစတင်နိုင်ပါပြီ။
သင်၏ ICP နှင့် TAM ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်လုံးဝဝေဖန်ပြီးပစ်မှတ်ထားသွားနိုင်သောစျေးကွက်မဟာဗျူဟာများနှင့် ABM ၏အောင်မြင်မှုကိုအခြေခံသည်။ SiriusDecisions သည်အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်သည် “ ပစ်မှတ်ဝယ်လိုအား” အလွှာ ဒီလိုအပ်ချက်ကိုအတည်ပြု, သူတို့ရဲ့ကျော်ကြား Demand ရေတံခွန်ထိပ်။ ထို့ပြင်သူတို့သည်စစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ရာယနေ့ထက်ဝက်ကျော်ကုမ္ပဏီများ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်၎င်းတို့၏ TAM ကိုတိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိသလောက်ရှိသည်။
သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ဒေတာကိုလက်ရှိထားပါ။ B2B အကောင့်နှင့်အဆက်အသွယ်သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြိုကွဲသွားသည်။ လေ့လာမှုများစွာအရ၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင် ၃၀ မှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကုမ္ပဏီများအားလုံးအတွက်ဒေတာဘေ့စ်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤပြproblemနာသည် ABM တွင်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အကောင့် ဦး စားပေးပြောင်းလဲမှုများ၊ စျေးကွက်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဖောက်သည်များ၊ အခန်းကဏ္, များသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များကိုဖုံးကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုသောသတင်းအချက်အလက်အသစ်များကိုရှာဖွေရန်သင်၏ပစ်မှတ်အကောင့်များကိုတက်ကြွစွာထားခြင်းအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ ကြောင်းလိုအပ်ချက်အချက်ပြ။ လူတွေကအခန်းကဏ္quကနေနုတ်ထွက်မယ့်နေရာရွှေ့ပြောင်းတဲ့နေရာတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေကတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးပြောင်းလဲပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းသင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုလတ်ဆတ်စွာထားခြင်းသည်တိကျမှန်ကန်သောပစ်မှတ်ထားမှုကိုသေချာစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏“ အဆင့် ၁” ပစ်မှတ်အားလုံးသည်ဝင်ငွေဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ အထက်ရှိသည်ဟုဆိုပါ။ သင်ပိုမိုလေ့လာသည်နှင့်အမျှရောင်းရငွေသံသရာသည်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံအောက်ရှိကုမ္ပဏီများအတွက်သိသိသာသာတိုတောင်းကြောင်းသင်တွေ့ရှိရသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဆင့် ၁ ရည်မှန်းချက်ကိုဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ သို့ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံသို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ ထို့နောက်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံထက်ကျော်လွန်သောဝင်ငွေရှိသူများကိုအဆင့် ၂ အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရည်မှန်းချက်တိုင်းအတွက်လတ်တလောနှင့်တိကျသော ၀ င်ငွေအချက်အလက်များကိုထားရှိခြင်းသည်သင်၏အားထုတ်မှုများကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပို။ ပင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအတူအကောင်းဆုံးအကောင့်။
အများဆုံးအောင်မြင်မှုအတွက်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရန် ABM ကိုအသုံးပြုပါ။ SiriusDecisions အရတင်းကျပ်စွာညှိနှိုင်းထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအဖွဲ့များရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများသည် ၃ နှစ်တာကာလအတွင်း ၂၄% ပိုမိုမြန်ဆန်သောဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှင့် ၂၇% ပိုမိုမြန်ဆန်သောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကအတွက်လေ့လာသင်ယူ 1,000 ကျော်စစ်တမ်း sales နှင့် marketing ခေါင်းဆောင်များ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများသည်ညှိနှိုင်းမှုကိုအခြေခံသည့်အဓိကအာရုံစိုက်ရာနေရာ ၄ ခုတွင်အားသာချက်များကိုပြသကြသည်။ ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်၊ ဘုံပိုက်လိုင်းတိုင်းတာမှု၊ ဦး ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောရှာဖွေခြင်းကိုမောင်းနှင်ရန်အချက်အလက်ကြွယ်ဝစေခြင်း။ ပိုကောင်းတဲ့ alignment ကိုခံရဖို့။ နံပါတ် ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ABM ၏ရည်မှန်းချက်ရွေးချယ်မှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြင့်မောင်းနှင်သင့်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုတစ် ဦး တည်းလုပ်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်စျေးကွက်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အခြားဗဟုသုတများစွာရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် ICP ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်ပါ ၀ င်ရမည်။ အရောင်းအတွေ့အကြုံများကိုနားထောင်ခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းအားဖြင့် ABM ၏အစောပိုင်းအဆင့်များကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် VP အဆင့်ကိုပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအရောင်းအရ VP နှင့်စကားပြောလျှင်၎င်းတို့သည်ဒါရိုက်တာအဆင့်အထိများလေ့ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ ABM တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်တစ် ဦး ချင်းငွေစာရင်းရှိအရောင်းအဖွဲ့များနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ နှစ်ဖက်စလုံးက ABM ၏မဟာဗျူဟာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ပါကအပြီးသတ်ဖြတ်သန်းရာတွင်အဓိကအပေးအယူများအားသယ်ဆောင်ပေးသောအဓိကအချက်များအားလုံးတွင်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
၀ င်ငွေတိုးပွားမှုကိုမောင်းနှင်ရန်သင်ကြည့်သည့်အခါစုစုပေါင်းလိပ်စာရသောစျေးကွက် (TAM) သည်စျေးကွက်အသစ်များ၏အရွယ်အစားကိုတိုင်းတာရန်၊ လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုတရားမျှတရန်သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အတွက်ဆန်းသစ်သောအခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသည်။ ကိစ္စရပ်တိုင်း၌ TAM ကိုတိကျမှန်ကန်သောအမြင်ရှိခြင်းသည်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏စျေးကွက်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ရောင်းဝယ်မှုနယ်မြေများကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်အစီအစဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုခွဲဝေချထားပေးခြင်းနှင့်အများဆုံး ROI အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုအဓိကထားခြင်းဖြင့်အထောက်အကူပြုသည်။
ကြီးထွားမှုကိုမောင်းနှင်ရန်တာ ၀ န်ယူလိုသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်များသည်၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်စျေးကွက်တွင်အားကြီးသောမောင်းနှင်အားရှိသင့်သည်။ ဤနိဂုံးချုပ်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်နေပါ
သင်၏ ICP နှင့် TAM ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်စတင်ခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သည် အကောင့် -based စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အစီအစဉ်နှင့်၎င်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါသည်။
တမ်သည်တစ်ကြိမ်သာလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးသင်၏စီးပွားရေးကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ အနည်းဆုံးနှစ်စဉ်သင်၏ ICP နှင့်သင်၏ပစ်မှတ်အကောင့်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
သင်ရှာဖွေနေသည့်စျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရန် TAM ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏အသင်းများကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမှာသင်၏ TAM ကို ပူးပေါင်း၍ အဘယ်သို့လျှင်ဖြစ်ရပ်များကိုလျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်လျင်မြန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏အချက်အလက်များကိုလက်ရှိသိမ်းဆည်းထားပါ၊ လူများ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများသည်မဟာဗျူဟာများကိုညှိနှိုင်း။ စျေးကွက်များအပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်တွင်ပစ်မှတ်အကောင့်များရှိ B2B အချက်အလက်မကြာခဏပြောင်းလဲတတ်သည်ကိုသတိရပါ။
Infographic - သင်၏စုစုပေါင်းလိပ်စာရသောစျေးကွက်ကိုအဆင့် (၄) ဆင့်ဖြင့်ရှာဖွေပါ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ eBook ကို Download လုပ်ပါ။ သင်စုစုပေါင်းလိပ်စာရသောစျေးကွက်ကိုသိသလား။ သင်၏ Go-to-Market ချဉ်းကပ်မှုကိုခေတ်မီအောင်လုပ်ရန်အဆင့် ၃
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ eBook ကို download လုပ်ပါ
Tags: abmအကောင့်ကိုအခြေခံပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးb2bမင်္ဂလာပါicpနေပြည်တော်အတွင်းပိုင်းမင်္ဂလာပါအတွင်းပိုင်း refreshအရောင်းဆိုင်အတွင်းပိုင်းအတွင်းပိုင်းပစ်မှတ်personaTamပစ်မှတ်ဝယ်လိုအားအလွှာထောက်လှမ်းရေးပစ်မှတ်ထားပစ်မှတ်စုစုပေါင်း addressable စျေးကွက်
ဂျိုး Andrews သည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဖြေရှင်းရေးစျေးကွက်၏ VP ဖြစ်သည် နေပြည်တော် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်မြင့်မားသောတိုးတက်မှု၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောနည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်ဝင်ငွေကိုမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ InsideView တွင်၊ ဂျိုးသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့်စျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုနေရာချခြင်းနှင့်စတင်ခြင်းကို ဦး ဆောင်သည်။ ယခင်က Joe သည် Zuora, VMware, Intuit နှင့် iMarket Inc. (D & B ကုမ္ပဏီ) တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်နေရာများရရှိခဲ့သည်။ သငျသညျအပေါ်ဂျိုးလိုက်နိုင်ပါတယ် တွစ်တာ နှင့် LinkedIn တို့.
Mobile App Store Store ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာများကို Pre-launch လုပ်နည်း
10:2017 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 09
ဒီ post အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်